Dhacdo Naxdin Leh oo Xanuun Badan oo Ka Dhacday Gaalkacyo (Dhageyso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhacdo Naxdin Leh oo Xanuun Badan oo Ka Dhacday Gaalkacyo (Dhageyso)
On Feb 25, 2019 287 0
Saaka salaadii subax kadib ayaa dadka ku nool wuqooyiga magaalada Gaalkacyo waxay arkeen meydka gabar yar oo shalay ilaa xalay ay baadi goobayeen ehelkeeda. Caa’sho Ilyaas oo 11 sanno jir ahayd ayaa lasoo dhigay bartii laga afduubtay.
Meydka gabadha oo la geeyay isbitaalka weyn ee Gaalkacyo waxaa ka muuqday Jirdil iyo ceego ay ugaysteen kuwii afduubtay, sida uu idaacada Al-furqaan usheegay nin ku sugan Magaalada Gaalkacyo.
“Lama garanayo cida gabadha afduubatay ee kula kacday falka guracan. Haddaba umadii oo dhan ayaa isugu soo baxday intaan ogahay waa markii ugu horeysay oo la kufsado gabadh saqiir ah kadibna la dilo” ayuu raaciyay hadalkiisa.
Laba maamul oo hoostaga Puntland iyo Galmudug ayaa ka jira Gaalkacyo, waxaana maleeshiyada maamuladaasi ay ku lahaadaan xilliyada qaar tacadiyo ka dhaca magaalada.
Wali labada maamul kama aysan hadlin falkaan oo dadku ku beeray casbi maadaama dadkii gaystay ay suurta gal tahay inay joogaan magaalada islamarkaana aysan muuqan cid wada baaritaan ku aadan kufsiga iyo dilka loo gaystay Caai’sho Ilyaas.
Marka dadka ay isku xukumi waayaan shareecada islaamka waxaa dhiiranaya kuwa dhex dabaasha macaasida oo ku dhaqaaqaya wax kasta oo ay tusto hawadooda maadaama aysan jirin cid kuwaasi marinaysa xadka ay muteysteen.
Halkan ka dhagayso Qof Ku sugan Magaalada Gaalkacyo oo ka sheekeynaya dhacdadan naxdinta badan.